Ahoana no fomba hanaovana faneva ho an'ny Youtube? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 722
Ny fianarana manokana ny fantsona YouTube anay dia tena zava-dehibe raha te hitombo ao anatin'ity sehatra video malaza ity isika. Raha mieritreritra ny hanokan-tena tanteraka amin'ny famoronana atiny ianao dia ilaina ny manomboka amin'ny alàlan'ny fantsona voalamina tsara.
Ao amin'ny lahatsoratray Androany izahay dia hanoro anao torohevitra mahasoa izay hanampy anao hamorona sora-baventy tonga lafatra amin'ny fantsonao YouTube. Amin'izao fotoana izao dia misy fitaovana samihafa afaka manampy anao amin'ny famolavolana ny faneva tsara indrindra, ary eto dia hiresaka ny sasany amin'izy ireo izahay.
Inona ilay faneva?
Iray amin'ireo zavatra lehibe tsy maintsy fantatsika izany alohan'ny hianaranao ny fomba fanaovana sora-baventy ho an'ny Youtube. Rehefa miresaka momba ny teny hoe "banner" isika dia miresaka karazana sary malaza izay ahafantarana ny fantsona iray.
Miavaka ny faneva, ankoatry ny zavatra hafa, noho ny habeny miavaka. Iray amin'ireo fahasamihafana lehibe io raha ampitahaina amin'ny sary na sary mombamomba azy izay mazàna kely kokoa sy marimarina kokoa. Eo an-tampon'ny fantsontsika no misy ny faneva.
Faneva natao tsara Mety ho fantsom-pifandraisana tonga lafatra hisamborana mpamandrika vaovao amin'ny fantsona misy anay. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mianatra mamorona endrika iray mahavariana sy mahaliana eo imasom-bahoaka. Amin'izany fomba izany no hahatratrarantsika ny fametrahana toerana tsara kokoa ny marika.
Azontsika rehetra atao ny manana ny fanevan-tsika
Misy ireo izay mihevitra fa ny fanaovana sora-baventy dia lahasa ho an'ny marika orinasa ihanyNa izany aza, afaka manana iray daholo isika rehetra. Ny olona dia afaka manana marika manokana ihany koa ary tsy maintsy manokana fotoana amin'izany isika hahatratrarana ny fitomboana eo amin'ny antonony sy maharitra.
Raha manana fantsona manokana ao anatin'ny YouTube ianao dia zava-dehibe ny hanombohanao mampiditra ny tsirairay amin'ireo singa izay mamantatra ny marikao, ohatra:
Famaritana ny fantsona
Ary mazava ho azy, ny faneva
Ahoana ny fomba hanaovana ny faneva tsara indrindra
Rehefa mamorona faneva tsara indrindra ho an'ny YouTube dia ilaina ny manisy lafin-javatra lehibe maromaro, ao anatin'izany ny fisainantsika sy ny fahaizantsika mamorona.. Aza adino fa ny fanaovana sora-baventy dia olan'ny famolavolana, ka ilaina ny famoronana.
Ilaina ihany koa ny mifidy programa famolavolana tsara na fampiharana. Soa ihany ao amin'ny tranonkala fa mahita fomba hafa azo soloina isika, ny sasany amin'izy ireo dia afaka tanteraka. Andramo mifidiana fampiharana iray izay manome anao maodely efa voaomana, izay tsy mila manova ny antsipiriany kely fotsiny.
Zava-dehibe izany tandremo ny haben'ny fanevanay ho an'ny Youtube. Aza adino fa miankina amin'ny fampiasa izay hitany no fahitana ny sainam-panahinao. Izy io koa dia fanalahidy hahafantarana ny fomba fampiasana ny loko, ny endri-tsoratra ary ny haben'ny sary izay ampidirinao ao amin'ny sainanao.
Azonao atao ve ny mametraka vitsivitsy teny izay mamaritra ny fantsonao. Noho izany ny olona dia hanana topy maso topimaso ireo lohahevitra ampianarinao ao anaty atiny ary afaka misoratra anarana raha sanatria ka mahasarika azy ireo.
Dingana tokony hampiakaranao ny banner amin'ny Youtube
hazo Click momba ny sarin'ny piraofilinao
Tsindrio "Ny fantsona anao"
Toerana ny fizarana famolavolana ary ampidiro ny sora-baventy noforoninao ho an'ny fantsonao.
1 Inona ilay faneva?
2 Ahoana ny fomba hanaovana ny faneva tsara indrindra
3 Dingana tokony hampiakaranao ny banner amin'ny Youtube
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary Youtube an'ny PowerPoint?